April 24, 2021 Xuseen 16
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, waxa uu qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay xubnaha Guddiga doorashooyinka Somaliland, kulankaas oo diiradda lagu saaray habsami u socodka qabsoomidda doorashooyinka goleyaasha wakiillada iyo deegaanka.
Ugu horrayn Guddiga doorashooyinka qaranku waxay madaxweynaha Somaliland, warbixin ka siiyeen qaban-qaabada iyo hirgelinta hawlaha wakhtigan socda ee qabsoomidda doorashooyinka wakiillada iyo deegaanka oo maraya meel muhiim ah. iyagoo xusay in hawlaha u diyaar-garawga doorashooyinku u socdaan sidii loogu tallo-galay, kuna qabsoomayaan xilligii hore la isula qaatay.
Sidoo kale waxa kulankaas lagaga wada hadlay kharashaadka ku baxaya doorashooyinka iyo ilaa hadda wixii ku baxay, si looga diyaar garoobo arrimaha dhaqaalaha ee doorashooyinka ku baxaya.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyada Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynuhu ku bogaadinyey guddiga doorashooyinka sida hagar la’aanta ah ee ay hawsha u wadaan, wuxuuna ku adkeeyay in doorashooyinku ku qabsoomaan muddadii lagu heshiiyey. Isagoo kula dardaarmay in masiirka ummadda iyo amniga q dushooda saaranyahay, loona baahan yahay dedaal iyo xilkasnimo dheeraada inay iska saaraan hawlaha miisaankooda iyo culayskoodaba leh ee ay gacanta ku hayaan.
INANTII AROOSKEEDA KA BOODDAY!
Marka dadnimada iyo damiirku kaa dhinto waa sida HILLAAC, Bakheyl baa jura quduuc ah oo walaalkii baraarihiisa bilkheyr aan odhan karayn, bulshada Somaliland anaa 100 jeer bilkheyr leh. Allow Somali badbaadi oo xaasidiinta ka qabo
Buuhoodle & Laas caanood.. Doorashada Somaliland ayaa ka dhacaysa.
Dhulooos & waroos, waa ciyaalak iidoorka.
The Somali Boqorate says:
Waxaa in la isxusuusiyo waajib ah inay Soomaalidu hiddo iyo dhaqan ulahayd inay ismaamul kuyeelato hadba aagga ay deggannayd oo ay qaabkaas kuhanatay Imberatooriyaddii Soomaaliyeed ee Islaamiga ahayd ee Ujuuraan (Ajuuraan) iyo saldanadihii ka dambeeyay ee garbaha iskuhayay oo mandiqaddeeda ballaaran teedsanaa.
Sida aalaaba wax udhici jireen, heshiisyo diinta iyo dhaqanka la isugu gacansaartay ayay qabaa’ilku iyo beeluhu iskugubiiri jireen oo ayna ismaamul tayo leh kuwadaagi jireen. Waxaana usii sahlay cilaaqadihii ay Soomaalidu dunida kale lalahayd, gaar ahaanna Khilaafadihii Islaamiga ee waagaas jiray maadaama ay diinta Islaamku waagaas ahayd xadaaraddii dunida oo dhan ugu shidnayd.
Khibraddaas iyada ah ayaa Soomaalida indaha ukalaqaadday oo kudhalisay inay iyaduna qaab imberatooriyanimo ah udhaqanto si ay iskugusinto heer ay awoodaha shisheeye qummaati iskagadhicin karto oo ayna cadkeeda ka gooan karto ganacsiga caalamiga ee xilligaas aadka ushidnaa.
Waxayna taasu usuuragelisay in abbaara qarnigii 10aad ay ucuratay imberatooriyaddii baaxadda weynayd ee Ajuuraan, taasoo ay dunidu qirtay inay tahay tii uguweynayd ee uguna cajiibsanayd ee Afrika iyo dunida oo dhan soomarta.
Imberatooriyaddaas Soomaaliyeed ee Islaamiga ahayd waa midda qura ee awoodihii waagaas jiray ee gaalo cad iyo gaalo madowba jabkii uguxumaa garsiisay oo qummaati iskaga caabbiyay xilli Afrikaanka intooda kale ay jaa silsiladihii addoonsigu luqunta iyo lugahaba kaga qardhabnaayeen.
Waxaa fajiciso weyn noqotay, in isla gaaladii – caddaan iyo madowba – ay Soomaalidu qarniyo badan dhulkooda kacaaggisay ay maantana gacma hoorsi uugujirto, talada masiirkeeda uga dabafadhiisatay oo ay iyadana kukala dhexjirto!
Sow taayadu ma aha taariikh dahabi ah ee uu waajibku ahaa inaynu dib uxusno, ugu muraajacoonno, oo kana yeelanno marjaca dhabta ah ee aynu masiirkeenna naga habaabay kuhagan karno? Maxaa naga dhoohay oo naga madoobeeyay?
Xalku taariikhdeennaas ayuu kadhex birbirqayaa ee walluusan meel kale noogu jirin; khaasatan walluusan gaalo gacmaheeda noogu jirin. Innaga oo murtimeerkii, qaddiyaddii, iyo dastuurkii Imberatooriyaddii Ajuuran/Cuthmaaniyadda boorka dib uga jafjaffana un baa nagaxiga in aynu xalka haleelno oo gaaladanna dhulkeenna ka erino.
WE WERE GREAT ONCE, WE CAN DO IT AGAIN!
Awlalool kolba sidii loo jabo ayaa loo dhutiyaa. Wakhtiga iyo waayaha inagu xeeran aad ayaad uga dhacsan tahay. Cajaladu waxey kaaga fadhiisatay wax qarniyo horteed dhacay amaba jirijirey. Once upon a time, there was…. ama beri hore waxaa jirey…. waxey ku taalaa uun buugaagta.
Maanta Puntlandtaas aad u gidhifgidhifleyneyso waxey kaga dhegentahay Federal. Hadii xitaa Janadaad tegeysaan lagu yidhaahdo ka fuqi meyso. Galmudug baa ugu dhow waataas Gaalkacayo ay isku heystaan. Garanweydey iney ka tanaasusho Mudug amabase aybiyadu ku qanciso in Mudug loo daayo oo ay qeyb ka noqoto. Mareexaan oo Daarood ah xitaa wey ka diideen iney wax ku darsadaan Puntland. Waxey kalooy weli ka quusan la Sahay Sool iyo Sanaag oo Somaliland ah.
Soomaaliya inteeda kale ee gacan ku rimiska ah iyana gudahooda ayay isku xagxaganayaan. Wax nidaam iyo kala danbeyn ahi ma jiraan.
Xaajada maanta ay dhex bariiqsan tahay ayaana daliil u ah.
Hadaba xaajadu waxey mareysaa Beesha Caalamka oo Soomaaliya ku baryeysa waar qabsada doorashadii macmalka aheyd eed kuraasta ku kala gadan jirteen.
Imikiyo Gunamad, Awooweyaashayo ayaa saldanado lahaa ama Maraakiip badaha waaweyn ku mushaaxi jirey waxa dhaanta adoo yidhaahda, kaariyoone yarna waan ku ganacsadaa dameerbyarina biyaha ayaan in
Dameer yar oon biyaha xaafada ugu dhaamiyo.
@@@@ Ahmed Shiine.
Suldaan salaan sare gudoon.
sxb Mr Awlal caawa xitaa Dameerihiina maku rartay kkkkkkkkkkkkk.
Awlal ninxun maaha laakiin cadcad ayuu toobin ku hayaa waxa ku badan Odeyga MalaAwaalka.
Sxb somalia xaalkeedu wuxuu marayaa XUURTII xaarka walaaqaneysey ee garan la’ Xaarkan baas ee Qadhmuun ka dul kac.
Balse aynu u dacayno umadaas caqligii ka tegey in ilaahay dalkooda u hagaajiyo iyagana caqligu kusoo noqdo.
Ramadaan wanaagsan sxb
Guudow, akhii, adiga oo aan i fahmin in aad ihaaraanto ma habboona baan filayaa.
Waan kuu qirayaa in maamul-BEELEEDKA Hargaysa ka arrimiya ama Somali-land, haddaan u dhigo sida aad jeceshay, uu ugu xasiloon yahay dhammaan maamullada ka jidha jamhuuriyadda Soomaaliya; maansha Allah, taas waan ku bogaadinayaa. Laakiin ma aadan fahmin waxa aan ka waday odhaahdeyda. Waxa aan ka waday, haddaan kuu bayaamiyo, ninka sawirkiisu meesha ka muuqdo ee horjoogaha u ah maamulka isku magacaabay SL.
Haddaba, ninka sawirkiisu meesha ka muuqdo iyo kooxdiisu meel wanaagsan kuma wadaan Hargaysa iyo ehelkeeda sida ay dad badani qabaan. Waxa ay dadka qaarkii isweydiinayaan, marka la eego habdhaqanka kaligii talisnimo iyo musuqmaasuq iyo caddaalad darro, intee in le’eg bay xasiloonida la haysto sii jidhi kadhaa?
Gunaanadkii, dedaal bay iga ahayd odhaahdaydaas kore ee waxba ha dhibsan. Deegaankana waan ka soo jeedaa oo igama xigtid ee taas la soco. Waxaadna ogaataa, haddaan la isasixin oo la istoosin oo la isu mashxarado oo aan la is canbaarayn marka wax khaldamaan, haadaan baa laga dhacayaa sidii jamhuuriyaddii Soomaaliya haadaanta uga dhacday. Muuse & kooxdiisu meesha ay Hargaysa iyo ehelkeeda ku wadaan ma wanaagsana.
Kaasi waa MADAXWEYNAHA iskii isu magacaabay (sida maamulka Hargaysa) ee mandaqadda SSC.
Hillaac, waxaa fiican qofku inuu cadaadado halbeegga uu isticmaalayo marka uu odorasayo siyaasadda deegamada kala duwan ee Somalida iyo hoggaamiyayaashooda, kana reebo caadifad si quluubta akhristaha u soo jiito. Marka aad Farmaajo sacab iyo mushxarad la daba socoto oo aad leedahay hawga soo dhaqaaqin , weligaa hay, sax iyo na daadidihi, oo durba Wasiir Bayle maanta leeyahay Somaliyeey yaa Allah wax siiyey noo soo dawiriya, oo aadan khatartaa ka digin, dhibna u arkayn, dadna ugu neceb tahay golaha musharaxiinta Hawiye u badan, mar walba ku celceliso waxba dhici maayaan ee wadadii cadayd cagta saarnay ee ku carraabi Farmaajo. Muse Behina aad leedahay, halkan bay ka qalloocatay, Garxajis baa dhufeys ku jira, waa duymaysaa, ahaahahaha, so arrintaadu ma aha heestii waaberi ku furi jirtay masraxa ruwaayadaha ee odhan jirtay ” Walaalaha Hanuusanow, waad idin la haynaa is hurina maynee, halkan waxaad u timaadeen een hagar lahaynba caawa ayaad naga helaysaan, aun waxa lahaa Cali Sugulle. Waxaan ka wadaa sheekadaadu waa qaab masraxiyadeed oo xataa aan musalsal socda oo hal structure leh ahayn, fikirkaagu wuxuu ku qotomaa, ma ha subjective , waase objective.
@@Shiine & Jamaamu,
“Waa baynu sidaas ahayn” waa falsafadda ay qowmiyadaha xadaaradda lahaan jiray ee mar hoos udhacay sha’nigooda dib ugusoo nooleeyaan oo kana yeeshaan shimbirka ay markale sare iskugu sooqaadaan; Shiinaha ayaana tusaale idiin kufilan maanta – halkii barriiqnaa 30 sano hortood iyo heerka uu maanta iskusoo simay.
Waddamada Yurub iyo Mareykan waxay wax walba kusaleystaan sooyaalkooda ay aadka ugu faanaan oo kana yeesheen marjaca kamadambeyska ah, iyaga oo cod dheer ugu dhawaaqaya wixii ay soo ahaan jireen iyo sida uu hiigsigooda iyo hiraalkooda marwalba ugu ahaan doono. Japanna xisaabtaas kudarsada iyo waxa ay imberatooriyaddoodii qaddiimka ahayd ka aaminsanyihiin.
Iidoorow, idinku haddii aydin hankaagteen anigu abid kama hankaagayo himilada, hiigsiga, iyo hiraalkayga ku aaddan inaynu markale noqon karno Imberatooriyad Islaami ah oo markale cizzigeenii iyo sharafteenii inoosoocelisa. “Somaliland” waa iska riyomaalmeed iyo han qabiili ah ee aan hiigsi iyo hiraal toona lahayn, Soomaalida iyo Ummadda Islaamkana waxba kusoo kordhin karin.
Albaqara ayaan marayaa, idinna Alif baydin weli taagantihiin; waana sababta aynaan isku maan u noqon karin aniga iyo idinku. Haantaas yar ee “Somaliland” ayaa idin la weynaatay ee bal mar uun kasoobaxa oo sida ay mandiqadda Soomaaliyeed waasaca utahay indhaha ku kalaqaada.
Runta sheega Ramadaan baynu ku jirnaa Sheeg meesha nabad , noolol , Horumar iyo xushmad kasbatay, soo maah idoor . Maahmaah Carabi ah aya tiraahda ( حضارة سادت تم بادت )
@AWLAL why u bedashay Magacii THE SOMALI BOQOTATE inamadan ma fahmayaane MACALIN CASHARKA HALKAAS KA WAD. Boqortootinkeenii.ADALITE SULTANATE, AHMED GUREY, SULTANATE, AFRIQUE AS SOMAL AL ISLAMI SULTANATE, AJURAN SULTANATE, WARSANGELI SULTANATE, MAJEERTEEN SULTANATE. Sidaas bay ku fahmayaan awoowayaashayo xaadaradoodii sidaas inoo fahamsii dadkayaga waa dad aan fahamsaneyn XADAARADOODA. Fadlan magagii AWLAL KU NOQO SI AAN U AKHRISANO CASHARADAADA AAN INABA CAADIGA AHEYN.
Salaan gobeed iga guddoon saaxiib, iyo mahadnaq kal-iyo-laab ah.
Ha ubaqina, magacan astaameed waxaan usooqaatay inaan ku daaddihiyo munaasabadda mowduucan qiimaha iyo qaayaha weyn ugufadhiya gobta ay Soomaalinimadu weli ka qoyantahay sidaada iyo anigaba.
RAMADAAN MUBAARAK Mudane Jirac.
kkkkk Sxb Aadbaan kaaga gudoomey Salaanta. Adna mid qiimo iyo qaayo lehbaan kugu salaamayaa.
Sxb malaha Awr aan kolna dhaanka ugu arooro kolna buulka ku rarto ayaa dhaami laheyd dameerka. Waan sii gam’ayay oo kamaaban fiirsanba. Kkkkkk
Ramadaantu hakuu wacnaato sxb. Nabad iyo caafimaad iigu noolow.
Thanks alot sxb adna sidoo kale cisi iyo sharaf ku noolow iyo ramadaan wacan khayrkeedana Alah hayna siiyo inshalah Aamiin Aamiin.
Kkkkkkkkkkkk odeyga Awlal waxaan yara arkay odeygii oo qawlalada ka xunbaynaya oo qaylinaya So called somalweyn iska Baha Baha ah ka sheekeynaya ayuu show Dameer la rarayo marna biyihii lagusoo dhasminayo ayuunbuu sawirtay in uu isagu laftigiisu Yahay sida Dameer Haamo madhan marwalba ku raran intifaacna lahayn kkkkkkkkk,
Rmadaan wanaagsa sxb